Kôngô (RDK) : Tsy iny lozam-piaramanidina tany Kinshasa iny no « ho farany » · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2007 0:25 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Français, Español, English
Du Cabiau à Kinshasa, dia blaogina Belza monina any Kôngô (RDK) ary toy izao no zavatra notateriny momba ilay lozam-piaramanidinina izay vao nitranga tamin'iny herinandro lasa teo iny tany Kimbanseke, izay kartie isan'ny mahantra sy be mponina tokoa any Kinshasa.
Dimampolo raha kely indrindra ireo olona namoy ny ainy ary amam-polony maro ireo izay naratra. Ary voarohirohin'iny voina iny ny Ministry ny fitaterana ka dia niongana nohon'ny « tsy nahafehezany mihitsy ny fanavaozana takiana amin'ny serasera ara-piaramanidina ».
I Du Cabiau à Kinshasa kosa dia mihevitra fa efa nampoizina ihany iny loza iny :
Tena efa nampoizina in'arivokeliny raha kely iny lozam-piaramanidina iny. Iaraha mahita ny tsy fisian'ireo fanamboarana ireo zotra an-tany (làlana, làlamby …), hany ka fiaramanidina no anatanterahana ny ankamaroan'ny serasera eto RDK. Tsy azo heverina ho araky ny maha firenena mahantra azy fa tena mifanjevo tokoa ireo fiara-manidina eny amin'ny lanitra eny. Amam-polony mahery izao ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka, izany hoe aman-jatony ireo loza mihantonkantona eny amin'ny rivotra eny. Isan'andro vaky izao izahay no mahita ireny fiaramanidina izay efa tena vizaka ireny anefa mbola miainga sy manidina eo ambonin'ireo trano fonenan'ny olona. Ka tsy iny lozam-piaramanidina no voalohany … ary tsy ho iny mihitsy no ho farany .
I Alex Engwete izay mpiblaogy Kôngôle dia manamarika fa rehefa misy voina ihany vao mahasarika ny mason'izao tontolo izao i RDK :
Naparitak'i CNN ny sarin'ilay fiaramanidina nirehitra tany Kinshasa. Sarina voina izay mahaliana ireo ngezalahin'ny fampahalalam-baovao … hany ka mahasarika azy aty RDK izay tsy ahoany akory andavan'andro.